Nnipa no yɛ nea obiara yɛ no bi (1-7)
Wopo Yehowa asɛm a, nyansa bɛn na wowɔ? (8-17)
Yeremia bɔ bena wɔ Yuda sɛe ho (18-22)
“Balsam ngo nni Gilead anaa?” (22)
8 “Saa bere no,” Yehowa asɛm ni, “wobeyiyi Yuda ahemfo nnompe ne ne mpanyimfo nnompe ne asɔfo nnompe ne adiyifo nnompe ne Yerusalemfo nnompe afi wɔn adamoa mu. 2 Na wɔbɛbaabae mu akyerɛ owia ne ɔsram ne ɔsoro asafo a wɔdɔɔ wɔn, na wɔsom wɔn, na wodii wɔn akyi, na wɔhwehwɛɛ wɔn akyi kwan, na wɔkotow wɔn no nyinaa.+ Wɔremmoa ano, na wɔrensie. Ɛbɛyɛ sumina* wɔ asaase ani.”+ 3 “Abusua bɔne yi nkaefo a wobenya wɔn ti adidi mu no, wɔbɛpɛ owu asen nkwa wɔ baabi a mɛbɔ wɔn ahwete no nyinaa,” asafo Yehowa na waka. 4 “Ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Wɔbɛhwe ase a wɔrensɔre bio anaa? Sɛ ɔbaako san n’akyi a, obi foforo nso rensan n’akyi anaa? 5 Adɛn nti na saa nkurɔfo yi, Yerusalemfo, nni nokware na wɔkɔ so ara twa nkontompo yi? Wokura nnaadaa mu denneennen;Wɔmpɛ sɛ wɔsan wɔn akyi.+ 6 Mewɛn m’aso, na mekɔɔ so tiei, nanso wɔanka nokware. Wɔn mu baako mpo nni hɔ a ɔsakra fii ne bɔne ho, anaa obisae sɛ, ‘Ɛdɛn na mayɛ yi?’+ Wɔn mu biara san n’akyi kɔyɛ nea obiara yɛ no bi; wɔte sɛ ɔpɔnkɔ a ɔde mmirika rekɔ ɔko. 7 Asukɔnkɔn a ɔwɔ wim mpo nim ne bere;*Aburuburuw ne asomfena ne apatiprɛw* mpo, sɛ bere so sɛ wɔbɛsan akɔ baabi a wofi bae a, wɔsan kɔ. Nanso me ara me man de, wɔnte Yehowa atemmu ase.”’+ 8 ‘Adɛn nti na moka sɛ: “Yenim nyansa, na yɛwɔ Yehowa mmara”?* Nea ɛwom ne sɛ, akyerɛwfo kyerɛwdua a ɛnka nokware no,+ atoro nko ara na wɔde kyerɛw. 9 Anyansafo ani awu.+ Wɔabɔ hu, na wɔbɛkyere wɔn. Hwɛ! Yehowa asɛm na wɔapo yi,Na nyansa bɛn na wɔwɔ? 10 Ɛno nti, mede wɔn yerenom bɛma mmarima foforo,Na mede wɔn nsaase bɛma nkurɔfo;+Efisɛ efi akumaa so kosi ɔkɛse so, obiara pɛ mfaso bɔne;+Efi odiyifo so kosi ɔsɔfo so, wɔn nyinaa bu nkurɔfo fa so.+ 11 Wɔsa me man babea akuru biarabiara,* na wɔka sɛ,“Asomdwoe wɔ hɔ! Asomdwoe wɔ hɔ!” Nanso asomdwoe biara nni hɔ.+ 12 Akyiwade a wɔayɛ no, ɛyɛ wɔn aniwu anaa? Ɛnyɛ wɔn aniwu koraa! Wɔn ani mmu wɔn dwɛ!*+ Ɛno nti, wɔbɛhwehwe ase wɔ wɔn a wɔahwehwe ase mu. Na ɛda a mɛba abɛtwe wɔn aso no, wobehintihintiw,”+ Yehowa na waka. 13 ‘Sɛ meboaboa wɔn ano a, mɛma wɔn awiei aba,’ Yehowa na waka. ‘Bobe aba biara renka wɔ bobe dua so, borɔdɔma biara renka wɔ borɔdɔma dua so, na ɛso nhaban bɛhyew.* Na nea mede maa wɔn no befi wɔn nsa.’” 14 “Yɛtete ha reyɛ dɛn? Momma yɛmmoaboa yɛn ano na yɛnkɔ nkurow a wɔabɔ ho ban no mu+ na yenkowuwu wɔ hɔ. Efisɛ Yehowa yɛn Nyankopɔn bekunkum yɛn;Wama yɛn nsu a awuduru wom sɛ yɛnnom,+Efisɛ yɛayɛ Yehowa bɔne. 15 Yɛhwɛɛ asomdwoe kwan, nanso adepa biara amma;Yɛhwɛɛ ayaresa kwan, nanso ade a ɛyɛ hu na aba!+ 16 Wote sɛ atamfo no apɔnkɔ reporow wɔn hwene mu wɔ Dan. N’apɔnkɔnini sũMa asaase no nyinaa wosow. Wɔba bɛsɛe asaase no ne nea ɛwɔ so nyinaa,Nkurow no ne emu nnipa.” 17 “Na hwɛ, meresoma awɔ aba mo mu,Awɔ a wɔn ano wɔ bɔre a nkonyaayifo rentumi nnwudwo wɔn,Na wɔbɛkeka mo,” Yehowa na waka. 18 M’awerɛhow nni aduru;Me koma yare. 19 Wɔte me man babea sufrɛWɔ akyirikyiri asaase bi so sɛ: “Yehowa nni Sion anaa? Anaasɛ ne hene nni hɔ?” “Adɛn nti na wɔde wɔn ahoni a wɔasen hyɛ me abufuw,Na wɔde ananafo anyamehunu huru me bo?” 20 “Twabere atwam, ahohuru bere aba n’awiei,Nanso wonnyee yɛn!” 21 Me man babea sɛe no nti, mabubu;+Me werɛ ahow. Ehu akyekyere me. 22 Balsam ngo* nni Gilead anaa?+ Na ɔyaresafo* biara nni hɔ?+ Ɛnde, adɛn nti na wɔnsaa me man babea yare?+
^ Anaa “ne bere a wɔahyɛ.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “belebele; nantwinoma.”
^ Anaa “Wɔnteɛ wɔn ho nsa me man babea akuru yiye.”
^ Anaa “Wonnim fɛre baako sɛɛ!”
^ Anaa “bekisã; beguan.”
^ Anaa “nkũ a ɛma obi ho dwo no fɔmm.”
^ Anaa “oduruyɛfo.”